Ny Covid-19 sy ny fiovana naterany teo amin’ny fiainako – Blaogin'i Voniary
Anton-javatra niteraka fiovana goavana teo amin’ny fiainan’ny manana aina rehetra ny valanaretina Covid-19. Iray amin’izany fiovana izany ny fiatoan’ireo asa aman-draharaha samihafa noho ny fijanonana an-trano. Izany angaha no nantsoina hoe fihibohana na koa hoe firindrinana. Isan’izay voakasik’izany ny tenanay amin’ny maha voary. Asiako teny ary ireto lafin-javatra manaraka ireto ho fanehoana ireo fiovana naterak’izany valanaretina izany, mifanindran-dalana amin’izany rahateo ny vokatry ny fihibohana.
Ireo zava-tsoa nentin’ny Covid-19
Hatreto dia manjary tandra vadin-koditra ho ahy ny fanaovana arotava, tsy fanao hatrizay izany saingy tsy maintsy nizatra ny tena ho fitandroana ny fahasalamana. Zary toa zatra ho azy ny tarehy manao azy ka manjary hafahafa vao tsy mipetaka izy, nefa koa indraindray mahatsapa ho voahelingelina misy azy, indrindra moa fa hoe miantraika mafy ny fandoroan’ny masoandro.
Ambarako mazava koa fa nianatra zava-baovao maro isan-karazany aho, tombony ho ahy ny nahafahako nandalina momba ireo tenim-pirenena hafa, nanokanana fotoana manko izany ka hita taratra tery ny fitomboan’ny fahaizana.
Fa tsy azo odian-tsy ambara ny fananana fotoana maro namakiana boky, marobe ireo boky fitaizam-pinoana sy boky fianarana isan-karazany voavaky, raha tsy hilaza afa-tsy « Ny zatovovavy miatrika ny fiainana » sy ny « Vakivakim-pianana ». Ambonin’izany koa ny fitomboan’ny traikefa teo amin’ny lafiny haifitarihana. Niaina betsaka teo anivon’ny ankohonana nandritra ny firindrinana ka nanomboka teo ny fampiharana ny leson’ny haifitarihana. Isan’ireo izay niharan’ny fikatonana tahaka ny sehatra maro ny fiangonana, ka nampiroborobo ny fahaiza-manao tamin’ny fitarihana ny hafa hitombo ara-panahy ny firindrinana. Nampiaina ny ankohonana izany hoe fiangonana an-trano izany, no niverina niaina ny fiombonam-bavaky ny mpianakavy rahateo. Kanto loatra iny vokatra iray iny.
Tsy atao ambany maso tsy hita koa ny vahana nananan’ny fotoana nanaovana fanatanjahantena satria ny tongomalady no nanjary fitaovam-pitaterana nampiasaina. Tetsy ankilany moa ny tsy fisian’ireo fiara fitateram-bahoaka ka nanaovana dia an-tongotra ny dia izay tsy maintsy notanterahina noho ny adidy aman’andraikitra. Nahatsapa ho tena nihanitombo herim-batana noho ny endri-panatanjahantena samihafa nefaina.
Na izany na tsy izany aza anefa dia hirika iray nahafahako nanamafy ny fahazarako mitondra fiarakodia koa ny fotoanan’ny firindrinana, tao anatin’ny fotoana izay tsy nisian’ireo fitaovam-pitaterana iombonana rahateo izany ka nahafoana tanteraka ny toham-boivoy. Mora ho azy ny nizatra namily fiarakodia. Ankehitriny dia voasarona ny tahotra rehetra nanakana tsy hitondrana fiara.
Petadrindrin’ny fifaninana. cc: Teny Gasy 2.0
Ireo voka-dratsy nateraky ny Covid-19
Fa tsy azo afenina koa nefa ny vokatra ratsy nateraky ny valanaretina Covid-19 sy ny firindrinana. Ho ahy dia misy lafin-javatra marolafy azo ambara. Asian-teny voalohany amin’izany ny fanamontsanany ny fahazaram-piainan’ny fifohazana maraina, nanome vahana ny hakamoana ny tranga samihafa satria saika ny ampahany manontolo tamin’ny fotoana dia lany nosintonin’ny torimaso avokoa. Mifamatotra amin’izany koa ny sintona mahery vaika teo amin’ireo karazana sakafo, nanjary tsy nahafehy tena ny amin’ireo sakafo isan-karazany ka na ny fandaniam-bola tamin’ny sakafo aza toa nanao tohivakana. Tsy saro-pantarina ny vokatr’izany, nitombo lanja ny tenako. Tsy ny fitomboan’ny lanja tsy akory no ratsy fa ny fandaniam-poana ny amin’ny sakafo samihafa.
Fa ankoatra izany dia tsy hay nofehezina koa ireo haitao avolenta tahaka ny lalao an-tsolosaina sy ny finday. Nandany ampahana fotoana maro tamin’izany koa ny tena ka toa tsy nahefa ny raharaha sasany aza, ary izay tena voka-dratsy dia ny tsy maintsy anaovana solomaso.
Izany rehetra izany no nentin’ny Covid-19, mifamatotra rahateo amin’ny firindrinana. Maro lafy ireo vokatra nentiny sy ny fiovana naterany. Ianarana sy tanana ny soa navelany ho an’ny tena ary ialana sy montsanina ireo ratsy napetrany.
Rakotonarivo Fabriola Rabin
coronavirus, covid-19, fifanianana lahatsoratra am-blaogy, fifaninana lahatsoratra am-blaogy, fifaninanana teny gasy 2.0, lahatsoratra am-blaogy, lahatsoratra blaogy, teny gasy 2.0
3 commentaires sur “Ny Covid-19 sy ny fiovana naterany teo amin’ny fiainako”
5 février 2021 à 10 h 43 min
Isaorana ny mpanoratra fa kanto dia kanto tokoa ilay lahatsoratra: fohy nefa mafonja . Deraina koa ny fiezahana nampiasa ny voambolana malagasy izay hita fa mahalaza ny tiana hambara. Mankasitraka e!
Mankasitraka fa dia kanto tokoa ilay lahatsoratra nosoratanao.Tena nahavariana ahy ny fampiasanao voambolana voafantina, ny fiezahana hiteny malagasy ary indrindra ny fizarana ireo voambolana somary vaovao na tena vaovao mihitsy aza satria ny sasany dia sambany vao mba henoko: »toham-boivoy,haifitarihana.
Toy izany koa ny firafitry ny fehezanteny, toy ny hoe: « misy lafin-javatra marolafy azo ambara » dia tsapa fa miavaka tokoa. Ny fampiasa dia hoe: « Misy lafin-javatra maro azo ambara. » Iriko ny mba hahazo voambolana tena malagasy toy izany amin’ny maha-mpampiofana mikasika ny taranja malagasy ahy. Mitomboa hasina tompoko!
22 février 2021 à 8 h 28 min
Rariny tokoa raha nahazo ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanana izy!